Xil. Odawaa oo qiil la yaab leh u sameeyey sababta ku qaadday inuu qabiil ka hadlo | Hadalsame Media
Home Wararka Xil. Odawaa oo qiil la yaab leh u sameeyey sababta ku qaadday...
Xil. Odawaa oo qiil la yaab leh u sameeyey sababta ku qaadday inuu qabiil ka hadlo
(Muqdisho) 05 Maajo 2021 – Xil. Cabdiraxmaan Odowaa, oo ah Xoghayaha Madasha Xisbiyada Qaran ayaa waraysi uu shalay siiyey hilinka Dalsan waxa uu kaga hadlay xaaladihii ugu dambeeyey ee dalka.
Odawaa ayaa ka hadlay arrinta ciidamada ku sugan aagagga kala duwan ee Muqdisho ee kasoo horjeestey muddo kororsigii laga laabtay ee Madaxtooyadu riixaysey, isagoo sheegay inay socdaan wada xaajoodyo lagu turxaan bixinayo wixii khaldamay kaddibna ciidanka laga saarayo magaalada, isagoo mas’uuliyadda xaaladda cakiran ku eedeeyey isla Madaxtooyada.
Yeelkeede, arrinta aad loo hadal hayey waa midda ku saabsan qabiilka iyo qabyaaladda ee uu sida furan uga hadlay Xildhibaanku, taasoo ay dadka qaar ku tilmaameen wax caadi ah, halka ay dad badan oo kale qabaan inaysan wax wanaagsan ku kordhinaynin siyaasadda dalka oo horraanba qabyaalad dartii u kici la’ayd.
“Haa!, ceeb miyaa xildhibaankiisa ayaa ahee, aniga kursiga aan ku fadhiyo beel sow kuma fadhiyo, waxaa ku fadhiyaa 4.5.” ayuu isku difaacay Xil. Odawaa oo ka fal-celinayey su’aal ku saabsan Saadaq John iyo inay hiilladiisu salka ku hayso arrimo qabiil.
Xildhibaan Odowa ayaa tillaabada uu qaaday ee muran dhaliska ah ugu qiil sameeyey inuu ka dabaaqayo mid sida uu yiri uu ku arkay MW Farmaajo oo uu ku eedeeyey in uu shir masiiri ah oo heer qaran ah uu u ”burburiyey” danaha Gobolka uu kasoo jeedo ee Gedo, sida uu qabo Odawaa oo tixraacaya shuruud ku saabsan Madaxwaynaha oo ku dhegey in loo daayo xulista Xildhibaannada Gedo.
Si kastaba, waxaa hubaal ah in dalka Somalia aysan dhib mooyee dheef ka heli doonin qabiil si xun loo fahme iyo qabyaalad oo ah cudurka 1-aad ee sambabka uga dhacay qarannimada dalka.
Previous articleMW Farmaajo oo qorshe cusub u bandhigay culimadii uu xalay la kulmay + Sawirro
Next articleDAAWO: Turkiga oo tijaabiyey gantaal noocyada la hago ah oo casri ah (Daroon oo si toos ah u burburiyey)